|lọ | MyCoolClass ngalaba
Maka ndị nkuzi,
Site na ndị nkuzi!
MyCoolClass bụn ndị nkụzi mba ụwa na-ekwenye na ikpo okwu ya n'ịntanetị. We jikọọ ndị nkụzi kachasị mma site na gburugburu ụwa nwere ezigbo ndị mmụta na-atọ ụtọ, oghere na ọdịbendị dịgasị iche. Ihe bụ ihe ọzọ, we nye ndi nkuzi ohere ka nwee ebe ọrụ ha.
Dịka onye ọrụ-ịkwado, anyị na-agbaso ụkpụrụ asaa nke International Cooperative Alliance wepụtara. Anyị na debara aha na United Kingdom dị ka ọha mmadụ na ndị òtù Co-operatives UK.
Jikọọ na #TEACHERREVOLT TAA
Uru Onye Ozizi Bara
Bụ isi. Nweere onwe gị ịmepụta nkuzi nke gị n'ụzọ nke gị. Control na-ejikwa ntinye akwụkwọ na nhazi oge gị ma tinye ọnụahịa gị.
Ọ dị mfe ijikwa ụmụ akwụkwọ na ikpo okwu nkuzi anyị.
Nkesa ihuenyo, ijikwa faili, iji oji, yana ịhazi ihe dị mfe ma kensinammuo. Ihe ikpo okwu a di na asusu iri ugbua ma ndi ozo di n'uzo!
Gwọ ọrụ ka mma, uru ka mma na nghọta zuru oke.
Ndị nkuzi na-akwụ ụgwọ 19% nke ego ha na-akpata kwa ọnwa ka ha na-akwado ya. Nke a na-ekpuchi ụgwọ ọrụ yana onyinye na ego izugbe iji nyere anyị aka itolite. Akụkụ nke 19% na-abanyekwa na oge ịkwụ ụgwọ gị! Anyị enweghị ndị na - ekenye oke ego. Dịka onye otu, ị nwekwara ụlọ ọrụ ahụ, wee nwee ike ikwu uche gị na ihe na-eme uru ọ bụla.
Ndị nkuzi ga-achịkọta ụbọchị 7 kwa afọ nke ụgwọ ọrịa ma ọ bụ ezumike nke onwe ha dịka onyinye ha na ụgwọ ọnwa ha. Anyị chọrọ ka ndị nkuzi lekọta onwe ha anya mgbe ha na-arịa ọrịa ma ọ bụ ka ha gaa ezumike n’agaghị efufu ego. I nwere ike wepụ ihe ị tinyere.
Onweghi ntaramahụhụ ma ọ bụ ntaramahụhụ maka ịkagbu ọ bụrụ na ị na-arịa ọrịa ma ọ bụ nwee ihe mberede.
Ihe ojoo na-eme. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu mberede ezinụlọ ma ọ bụ na ịchọrọ ịhapụ ụbọchị ole na ole, hapụ klaasị gị ma mee ka ndị otu na-akwado ya mara.
Oge obula, ebe obula, ebe obula
Ihe ikpo okwu anyị na-arụ ọrụ ebe ọ bụla ị nọ na ebe ọ bụla okporo ụzọ na-ewe gị. Niile ị chọrọ bụ njikọ internetntanetị. Ihe ikpo okwu anyi na aru oru na China na enweghi mgbochi.
Na-enyere aka ịme mkpebi dị mkpa.
Onye nkuzi ọ bụla ga-enwe ike ịnweta weebụsaịtị naanị ndị otu raara nye ngalaba, yana ozi gbasara ego, iwu na ụkpụrụ, ozi ntuli aka, ntuli aka na ndị ọzọ. Onye otu ọ bụla nwekwara ike ịgba ọsọ maka Board of Directors.
Mepụta ma rụkọta ọrụ
Bido ma ọ bụ sonye na Otu Okike wee zụlite ọmụmụ ihe yana ndị nkuzi ndị ọzọ. Nyefee ihe ọmụmụ gị maka nnabata site na Board Curriculum wee bụrụ ndị otu anyị ga - eme ka ndụ gị dị ndụ! Gị na ndị otu gị ga-enweta ụgwọ ọrụ mgbe akwụchara ihe ọmụmụ gị!
Nyere ndị kacha chọọ ya aka
MyCoolClass na-ezube imepụta mmemme iji nye ụmụaka nkuzi nsogbu n'efu site na ịmepụta ego na-enweghị uru.
Mgbanwe na ịrụ ọrụ nke ọma ịkwụ ụgwọ
MyCoolClass nwere ọtụtụ nhọrọ ịkwụ ụgwọ iji jide n'aka na a ga-akwụ gị ụgwọ dịka o kwere mee.
A nabata ndị nkuzi niile.
O b ur u na i ruru eru ikuzi ihe nd ii na-enye, i meela. Anyị achọghị ịma onye ị bụ, ebe ị si, obodo gị, ma ọ bụ asụsụ ị na-asụ. Kpa oke agbụrụ adịghị mma ma ọ nweghị ebe agụmakwụkwọ.
Ọ bụrụ na ị masịrị ihe anyị na-eme ma chọọ igosi nkwado ka anyị na-eto,
onyinye gị nwere ekele.
Nye onyinye site na GoFundMe
Nye onyinye site na PayPal
Co-Op nke Onye Ozizi nwere
Ee, nke ahụ dị mma !!! Ndị nkuzi niile na-abụ onye nwe ụlọ ma nwee oke na ụlọ ọrụ ahụ. Dịka nkwekọrịta, ọ dịghị "Nnukwu Onyeisi" ma ọ bụ ndị na-etinye ego na-eme mkpebi niile. Onye ọ bụla nwere oke na ụlọ ọrụ yana nha nha.
Imekọ Ihe Ọnụ N'ime Ndị Ọrụ Na-arụ Ọrụ
Ikere Nke aku na uba
Ezumike nke onwe
Ọzụzụ & Mmụta
Enweghị Iwu Draconian
Ndị Nkụzi Na-arụkọ Ọrụ
Tinye akwụkwọ ịbụ Onye Ozizi
Brandbook & Akara
© 2021 MyCoolClass Co-operative nwere mmachi | Ikike niile echekwabara.
E debara aha na United Kingdom dị ka ọha mmadụ e debara aha n'okpuru Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014. Reg. Nke 4790
XAnyị na -eji kuki na weebụsaịtị anyị iji nye gị ahụmịhe kachasị mkpa site na icheta mmasị gị na ịmegharị nleta ugboro ugboro. Site na ịpị "Nabata ihe niile", ị kwenyere na iji kuki niile. GỤKWUONtọala kuki Nabata Ha Niile
Kuki bụ obere data (faịlụ ederede) nke webụsaịtị - mgbe onye ọrụ bịara - na -ajụ ihe nchọgharị gị ka ọ chekwaa na ngwaọrụ gị iji cheta ozi gbasara gị, dị ka mmasị asụsụ gị ma ọ bụ ozi nbanye. Ọ bụ anyị setịpụrụ kuki ndị ahụ wee kpọọ kuki ndị ọzọ. Anyị na-ejikwa kuki ndị ọzọ-nke bụ kuki sitere na ngalaba dị iche na ngalaba nke weebụsaịtị ị na-eleta-maka mgbasa ozi na mbọ ahịa anyị. Biko lelee nke anyị amụma nzuzo ịmụtakwu gbasara otu anyị si eji kuki.
Anyị na -eji kuki maka ọtụtụ ihe kpatara ya dị ka;
iji rụọ ọrụ dị mkpa nke weebụsaịtị MyCoolClass,
iji bulie ahụmịhe gị site na iji MyCoolClass,
iji ghọta nke ọma otu ndị mmadụ si eji weebụsaịtị. Nke a nwekwara ike ịgụnye kuki sitere na weebụsaịtị ndị ọzọ na-elekọta mmadụ.
Nwere ike ịgbanwe ntọala kuki gị n'oge ọ bụla site na isoro ntuziaka na ala nke ibe ahụ na "Jikwaa kuki gị".
Anyị na-eji kuki na teknụzụ nsuso ndị ọzọ maka ebumnuche ndị a:
Inyocha otú ọbịa, ị anyị na ebe nrụọrụ weebụ
Iji nyochaa ewu ewu klaasị na ọmụmụ ihe
Iji nyere anyị aka ime ka arụmọrụ na nkwalite ọdịnaya webụsaịtị anyị
Ijikwa mmasị gị na kuki gị
You nwere ike igosi mmasị kuki gị na weebụsaịtị MyCoolClass, ị nwekwara ike ijikwa kuki site na ntọala ihe nchọgharị weebụ gị. Imirikiti ihe nchọgharị weebụ na-ekwe ka ụfọdụ nchịkwa nke ọtụtụ kuki. Iji chọpụta ihe ndị ọzọ banyere kuki, gụnyere otu esi ahụ kuki etinyela, gaa na www.aboutcookies.org ma ọ bụ www.allaboutcookies.org
Chọpụta otu esi ejikwa kuki na ihe nchọgharị ndị ama ama:
Iji chọta ozi metụtara ihe nchọgharị ndị ọzọ, gaa na ebe nrụọrụ weebụ ihe nchọgharị.
Iji pụọ na nyocha Google Analytics gafee weebụsaịtị niile, gaa na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
_wpfuuid 11 afọ WPForms WordPress ngwa mgbakwunye na -eji kuki a. A na -eji kuki ahụ na -enye ohere ụdị nkwụnye ụgwọ iji jikọọ ndenye site na otu onye ọrụ ma ejiri ya maka ụfọdụ atụmatụ ndị ọzọ dị ka agbakwụnye Mgbapụta Ụdị.
_fbp 3 ọnwa Facebook setịpụrụ kuki a iji gosipụta mgbasa ozi mgbe ọ nọ na Facebook ma ọ bụ n'elu igwe dijitalụ nke mgbasa ozi Facebook kwadoro, mgbe ọ gara na weebụsaịtị.
fr 3 ọnwa Facebook na -edobe kuki a iji gosi ndị ọrụ mgbasa ozi dị mkpa site na nsuso omume onye ọrụ n'ofe weebụ, na saịtị nwere pixel Facebook ma ọ bụ ngwa mgbakwunye Facebook.
yt-remote-ejikọrọ-ngwaọrụ mgbe A na-edobe kuki ndị a site na vidiyo youtube agbakwunyere.
yt-remote-ngwaọrụ-id mgbe A na-edobe kuki ndị a site na vidiyo youtube agbakwunyere.
_ga_QB4KJ2NX1F 2 afọ Nchịkọta Google arụnyere kuki a.
Nkwupụta Afọ iri na isii 16 ọnwa 3 ụbọchị 26 awa A na-edobe kuki ndị a site na vidiyo youtube agbakwunyere. Ha na -edebanye aha ndekọ ọnụ ọgụgụ na -enweghị aha, dịka ọmụmaatụ, ugboro ole ka egosipụtara vidiyo ahụ na ntọala a na -eji maka ịkpọgharị. Enweghị data anakọtara nke ukwuu belụsọ ma ị banye na akaụntụ google gị, ọ bụrụ otu a, nhọrọ gị jikọtara na akaụntụ gị, dịka ọmụmaatụ. ọ bụrụ na ị pịa "amasị" na vidiyo.